कोरोनाको उच्च जोखिममा विद्यालय, विद्यार्थीले मास्क पनि साटासाट गर्दै लगाउँछन्  ! - Himali Patrika
कोरोनाको उच्च जोखिममा विद्यालय, विद्यार्थीले मास्क पनि साटासाट गर्दै लगाउँछन्  !
हिमाली पत्रिका ३० चैत्र २०७७, 10:00 am
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बराल एक साताअघि काठमाडौंको एक स्कुलमा पुगे। उनी साना बालबालिकामा पनि कोभिड संक्रमण देखिएपछि छड्के अनुगमनमा स्कुलमा पुगेका थिए। बराल सिसिएमसी समितिका संयोजक पनि हुन्।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कोरोना कहरबाट जोगिन देशभरिका विद्यालयमा विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी भइसकेको बताए। ‘विद्यालय बन्द नै कोरोना जोखिमबाट बाँच्ने विकल्प होइन,’ उनले भने, ‘विद्यालयहरूलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ। अब स्थानीय निकायले विद्यालयहरूले विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा पालना गरे/नगरेको अनुगमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’ साभार : नागरिकन्यूजबाट